भौतिकको सरुवामा गलत परम्पराको ब्रेक – Aarthik Dainik
breaking Posted on १३ पुष २०७६, आईतवार ११:१३
Author Ram Prasad Pudasaini
आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक दलका नेता तथा ट्रेड युनियनको दबाबमा सरुवा गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विगतदेखिको परम्परा तोडिएको छ । वरिष्ठ र क्षमतावान्भन्दा लेनदेनमा आयोजना/योजना र डिभिजन प्रमुख बन्ने र बनाउने गलत परम्पराको कारण पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि यसपटकको सरुवा ‘करेक्सन’ हुनपुगेको छ ।
विगतमा पैसा बुझाउने सामथ्र्य राख्ने जुनियर पनि महत्वपूर्ण आयोजना/योजना तथा डिभिजनमा प्रमुख बन्ने गरेको तीतो यथार्थ भौतिकमा थियो । त्यही गलत परम्परालार्य निरन्तरता दिन केही राजनीतिक दलका केही नेता, कर्मचारीका नेता र प्रशासनिक तहबाट चलखेल गर्न सेटिङ मिलउँदै गर्दा भौतिकमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, सचिव देवेन्द्र कार्की तथा सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूहको एक्कासि सरुवा, पदस्थापन र काज सरुवा गरिदिएका हुन् ।
मन्त्रालयले काजमा खटाउँदा समेत वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिएको छ । अब सडक विभागले इन्जिनियरको सरुवा गर्दा पनि वरिष्ठलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यसपटकको सरुवामा इन्जिनियरलाई सीडीईको जिम्मेवारी दिँदा तथा सीडीईलार्य सपरिनटेन्डिङ (सुई)को जिम्मेवारी दिँदा एक/डेढ वर्षमा बढुवा हुने सबैभन्दा सिनियरलाई मात्र मौका दिइएको छ । यो सरुवाले सिनियरलाई काम गर्न हौसला दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार विगतमा भएका गलत सरुवा ‘करेक्सन’ गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट समेत आएको निर्देशन भौतिक मन्त्रालयले पूर्णतया पालना गरेको छ । पदस्थापन नगरी सरुवा गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने समूहलाई मन्त्रीले प्रवेश नै गर्न दिएनन् । ‘हल्ला नै नभई सरुवा भयो’, एक सीडीईले शनिबार आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘पहिला सरुवा हुँदा कुन ठाउँमा जाने इच्छा छ भनेर मन्त्रीले नै सोधेर यो व्यक्तिलाई नाम टिपाउनु भनेर दलाल चिनाउँथे । यसपटक सरुवा भएपछि मात्र जानकारी पाइयो ।’ नेता र आर्थिक चलखेलले सरुवामा मौका पाएन । भौतिकमन्त्री नेम्वाङले जुन हिम्मत गरे, त्यो सह्राहनीय छ ।’
विगतमा निर्माण व्यवसायीको दबाब र आर्थिक चलखेलमा समेत सीडीई, सुइ र इन्जिनियरको समेत सरुवा हुने गरेको थियो । आर्थिक चलखेलमा सरुवा हुँदा सरुवा हुनेले समेत व्यवस्थापन गर्दैमा समय जाने गरेको थियो । जसको कारण भौतिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका सडक कार्यालयहरुको पुँजीगत खर्च र काम गराइको गुणस्तरको बारेमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । अब सरुवा र कार्यालय रोजाइमा सिनियरहरुले प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिएपछि कर्मचारीमा काम गर्न जाँगर बढेको छ ।
विगतमा जुनसुकै दलका भौतिकमन्त्रीले पनि चलखेल र लेनदेनमा मात्र सरुवा गर्दै त्यसलाई परम्परा नै बसाएका थिए । त्यो पैसा ठेकेदारसँग असुल गर्नुपर्ने भएकाले कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको थियो । अब सरुवामा पैसा बुझाउनु नपर्ने भएपछि सडकका हाकिमले ठेकेदारसँग मिलेर पैसा उठाउनुपर्दैन । त्यही कारण काममा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा सडक विभागका अधिकारीहरुको छ । ‘विगतमा भौतिक मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्री र राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संस्थाका नेताको सिफारिसमा सरुवा गर्थे’, सडक विभागकै अर्का एक अधिकारीले भने, ‘कसैको सिफारिस नलिई मन्त्रीले सरुवा गर्दा काम गराउन नै सजिलो हुन्छ । अब भौतिकले पुँजीगत खर्चमा छलाङ मार्नेछ ।’
स्रोतका अनुसार यसपटकको सरुवा सूची बनाउँदा अतिगोप्य तरिकाले मन्त्री नेम्वाङले सचिव कार्की र महानिर्देशक शर्मालाई सिनियर र क्षमताको आधारमा सरुवा सूची बनाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार बनेको सूचीलाई भौतिकमन्त्री नेम्वाङले ‘क्रसचेक’ गर्दै फाइनल गरेका थिए । विगतमा यस्तो सूची स्वकीय र निजी सचिवालयबाट पनि तयार हुने गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सरुवामा चलखेल गर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएपछि सरुवाको टिप्पणी फाइल उठाउने विषयमा भौतिकको प्रशासन महाशाखामा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी लिएका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले त सरुवामा असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका थिए । जसले असहमति राखे पनि भौतिकमन्त्री नेम्वाङले कर्मचारी सरुवामा जुन नीति लिएका छन्, त्यसको कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सडक निर्माणको कामले गति लिने देखिन्छ । कर्मचारी सरुवामा विगतदेखि चल्दै आएको गलत परम्परा तोडेका मन्त्री नेम्वाङले सरकारलाई सफल पार्न र पुँजीगत खर्च बढाउन प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा निगरानी बढाउन तथा काठमाडौं उपत्यकामा जाम हटाउन अन्डरपास र फ्लाई ओभर काम तत्काल थाल्नुपर्नेछ ।
भैतिकमा आर्थिक लेनदेनमा मात्र सरुवा गर्ने गरेको कारण चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवमा भौतिकलाई ३५ प्रतिशत बढी पुँजीगत बजेट प्राप्त छ । कर्मचारी सरुवामा चलखेल र सिनियरलाई अवज्ञा गर्ने गरेको कारण यसपटक पनि पुँजीगत खर्च नहुने अनुमान गरिएको थियो । सिनियरलाई प्राथमिकता दिएपछि अब कर्मचारीहरुलाई काम गर्नैपर्ने दबाब परेको छ । ‘क्षमता देखाउन सिनियरहरुले काम गर्नैपर्नेछ’, भौतिकका एक अधिकारीले भने, ‘सिनियरहरुले अपेक्षाअनुसार क्षमता देखाएर काम गरेनन् भने फेरि विगतको जस्तै सरुवामा लेनदेनको गलत परम्परा प्रवेश गर्ने डर हुन्छ ।’ यद्यपि क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि दुई/तीन जना सीडीईको सरुवामा व्यवस्थापन गर्न भने मन्त्रालय चुकेको छ । स्रोतका अनुसार अशोक तिवारी, धर्मेन्द्र झा र ललिजन खनालको व्यवस्थापन मिलाउन मन्त्रालयले सकेको छैन ।
मन्त्रालयले सुइ भीमार्जुन अधिकारीलाई सडक विभागको सम्भार महाशाखामा प्रमुखमा पठाएको छ । त्यस्तै सरोज कुमार प्रधानलाई भौतिक मन्त्रालयको मूल्यांकन महाशाखा (योजना), उमेश विन्दु श्रेष्ठलाई मदन भण्डारी राजमार्गको आयोजना प्रमुख, देवकुमार तामाङलाई कायममुकायम सुइ पोखरा, कैलाश कुमार श्रेष्ठलाई सुइ सुर्खेत, शिवराज अधिकारीलाई पुष्पलाल राजमार्गको योजना प्रमुख काभ्रे, विजय चापागाईं कामु आयोजना प्रमुख नारायणगढ–मुग्लिङ सडक योजना, रोहित कुमार बिसुराल कामु आयोजना निर्देशक हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, घनश्याम गौतम कामु सुइ गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, ज्ञानेन्द्र कुमार झा योजना प्रमुख कान्ति राजमार्ग, अर्जुन प्रसाद अर्याल मदन भण्डारी राजमार्गको योजना कार्यालय हेटौंडा र बेल बहादुर भुजेल सोही कार्यालयको गाईघाट प्रमुख बनाइएको छ ।
त्यस्तै, देशकै संघीय राजधानी काठमाडौंको सडक कार्यालय प्रमुखमा कुवेर नेपालीलाई ल्याइएको छ । नेपाली क्षमतावान् डीईमा पर्छन् । उनी तुम्लिङटार सडक कार्यालय रहँदा कम बेरुजु उत्पादन गरेको कारण पुरस्कृत भएका थिए भने सडक कार्यालय ताप्लेजुङमा रहँदा निजामती कर्मचारी पुरस्कारको लागि जिल्लाबाट सिफारिसमा परेका थिए । त्यस्तै गत वर्ष सडक विभागमा सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट गर्ने कार्यालय प्रमुख भएका थिए ।
त्यस्तै, भक्तपुरमा सिनियरमध्येका सीडीई विष्णु प्रसाद काफ्लेलाई ल्याइएको छ । सिनियर इन्जिनियर लीला भण्डारीलाई जुम्लाका कामु डीई, विष्णुबाबु पाण्डेलाई सहिदमार्गको कामु योजना प्रमुख, रमेश चौधरीलाई बैतडी डिभिजनको कामु प्रमुख, वीरेन्द्र गौतमलाई गणेशमान सिंह मार्गको कामु योजना प्रमुख, कैलाश कुमार देवलाई पुल योजना पूर्वी सेक्टर नं. १ धरान पठाइएको छ । भौतिकले सुइ, सीडीई र इन्जिनियर गरी ५८ जनाको सरुवा/पदस्थापन गरेको हो ।
‘हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार’बाट घिसिङ र रुइत सम्मानित
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १०:५४
धितोपत्र बोर्डद्वारा नयाँ नीति लागू
१६ पुष २०७६, बुधबार १०:२१
चिनी उद्योगीलाई ठगीमा कारबाही
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:०७
हिमालय डिष्टिलरीका सञ्चालक श्रेष्ठ र ब्रोकर कम्पनीलाई जरिवाना
लकडाउनलाई निरन्तरता÷विकास निर्माणमा खुकुलो
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ११:४०
‘नेपालमा कोरोना महामारी बढ्नुमा भारतको प्रमुख भूमिका’
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०१:५९
Hardship Assistance. We could help you with difficulty
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ००:३८
Cheap Essays: How Good Will They Be Actually
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार २३:५३
How exactly doesaCompany Personal Credit Line Work?
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:५१